Daawo Video qosol badan: In sidaan wax loo biiyana way inoo dhinneyd!!	January 29, 2013 8:56 AM0 comments	Adduunka inta aad joogto wax walba iska sug, mar unbaad arki doontaa. Haddii dadka qaar ay ku dhib qabaan inay shaqeeyaan, koox meeshan ah waxa ayba shaqadii oo idil ka dhigteen baashaal iyo qosol. Waxa ay ka shaqeeyaan dukaan lagu iibiyo kabaha, waxyna lasoo baxeen farsamo iyo hab isku diib […]
Daawo Video: Dadka dunida oo Yaab aan horey loo arag sameynaya 2013	January 27, 2013 12:15 AM0 comments	Maalin kasta wax cusub ayaad ku arkeysaa adduunka, dadkuna waxa ay sameynayaan waxyaabo yaab leh oo aan horey loo arag ama ay adkeyd in xitaa la sameeyo markii hore. Video-gan waxaa halku dhiggiisu yahay “People are Awesome in 2013″ (Dadku waa cajiib sanadka 2013), waxaana lasoo ururiyay dhacdooyin badan oo […]
Dhacdo la yaab iyo amakaag leh oo lagu arkey waddanka Sacuudiga	12:03 AM0 comments	Haddii ay aad Maqli jirtey Dad Soomaali ah baa Madaxfurasho loogu Haystaa Liibiya, Koonfur Afrika , Yaman, Koofurta Suudaan, Kenya , Musaambiik, Tansaaniya, Angola, Zaambiya iyo Wadamo kale , waxayna dadka Soomaaliyeed Madaxfurshadaasi ku bixiyaan lacag aad u fara badan, si loo siidaayo la Haystayaasha , iyadoo taasi jirto ayaa […]
MUCJISO: Guri iyo dadkii ku noolaa oo gubtay iyo Kitaab Qur’aan ah oo bad-baaday (Aqri faah faahin)	January 26, 2013 1:00 AM0 comments	Alle ayaa Quraankiisa noogu sheegay inuu koryeelaayo ama uu xafidaayo Quraankiisa, Waxa ay ahayd Maalin Talaado ah waxaa mar Qura Gubtay Guri ku yaala Dalka Ciraaq oo ay ku sugnaayen Ehelkii lahaa Gurigaasi ruux ka bad-baadayna ma jirin Dabka ka kacay gurigaasi markii laga reebo Kutubo Qur’an oo yiilay Qeyb kamid […]
Mucjiso: Daawo Video: Timahaagu ma lee yihiin awood intan la eg?	January 25, 2013 2:00 AM0 comments	Aadanaha illaahay isku mid kama uusan dhigin oo waaa jira dad la siiyay heybad iyo awood gaar ah oo dadka kale aysan heysan. Muuqaal video-gan wuu idinka yaabin doonaa. Nin lagu magacaabo Alex Riachi oo u dhashay dalka Lebanon ayaa timahiisu waxa ay awood u lee yihiin in xarig ahaan […]
Daawo Vide: Wariye sameeyay arrin la yaab leh Xili uu TV-ga Live ka ahaa	January 21, 2013 8:04 AM0 comments	Wariye arin la yaab leh ka sameeyay Tv live ah kadib markii uu si kadis ah uu guur ugu soo bandhigay gabar u jeclaa oo Barnaamij kala qeyb galeeysay oo ayadana kaa qabashay. Hadaba Muuqaalka aan idiin soo gudbineeynaa muhiimadiisa waxeey tahay adigu sidaan ma sameyn laheyd oo Gabar ma […]
Daawo Video-gan: “Diiq la rabo in la qalo oo ku dhawaqaaya magaca Allah”	January 20, 2013 6:50 PM0 comments	Mucjisada Alle waxaa ka mid ah. “Diiq La rabo in la qalo oo ku dhawaaqaya Magaca Alle” Subxaanallah alle wax kasta wuu awoodaa wax kastana waa qadarta alle ee nala daawo Muuqaalkaan: Hadaba Aqristoow waxaan idiin kugu soo gudbinay in aad aragtaan wax kasta oo ku dhacaya qadarta alle ee […]
Video: Sidan ma sameyn laheyd hadii aad kala garan weydo Ilmahaada:	2:00 AM0 comments	Aqristoow Soomaali waxeey tiraahdaa Nin Aduunyo joogoow maxaa aragti kuu laaban tana ma inoo dhineyd ee nala arag Aqristoow. Muqaalkani waa Reer Ilmahooda kala garan wayay oo Nambaro ku kala qoro Madaxyada CIyaalka adaa yaabi doonee daawo. HALKANA RIIX SI AAD U DAAWATO: Sii Akhri ›
Daawo Video Qosol leh: “Qof jirkiisa sida Music camal u garaacmayo”	January 19, 2013 11:00 AM0 comments	Aduunka maalinba maalinta ka dambeeysa Caalamka wax kaa yaabiya ayaad arkeysaa maantana arintaan oo Caalamka ka yaabisay ayaa la arkay ee nala daawo. Aqristoow Musikada Casruga cusub ma’ahan mid la tumayo ee waa mid Bini’aadan laga tumayo ee Daawo Muuqaalka adaa Qosli Doonee: “Nin Musikada Calooshiisa iyo Dhabarkiisa laga Garaacayo […]
Daawo Video-gan: Yaabkan oo kale weligaa ma aragtay?	January 18, 2013 8:15 AM0 comments	Muuqaalka Comic ayaa ka yaabsaday Caalamka kadib markii la arkay gaari kaligii wada oo wax kasta sameyn karo ayadoo arintaasi ka yaabisay Kumanaan Dadweyne ee arkay. Aqristoow Muuqaalkaan marka aa daawato waxaad arkeysaa in Aduunka uu gaaray Horumar dhan walba ah taas oo ah in wax kasta oo lagu fakaro […]